Nandefa Twitter i Tim Cook ary nitsidika ireo magazay Palo Alto Apple | Vaovao IPhone
Nandefa Twitter i Tim Cook ary hita miaraka amin'ny ekipany ao amin'ny Apple Stores ao Palo Alto
Androany ny maodely vaovao an'ny iPhones dia natomboka ho an'ny firenena andiany voalohany izay noheverin'i Apple fa mety ho azy ireo ho voalohany manana azy ireo. fitaovana vaovao eo amin'ny talantalan'ny Apple Stores anao. Tsy nampoizina fa ireo mpikambana vaovao niditra tamin'ny fianakavian'i Bitten Apple ireo dia nahatonga a fahatezerana lehibe amin'ireo olona erak'izao tontolo izao, manondraka ny tranonkala miaraka amin'ny sarin'ireo fitaovany vao azony.
Andro vitsivitsy izay no nanomboka niforona teo anoloan'ny Apple Stores ireo filaharana, toetra isaky ny mamoaka vokatra tsara i Apple. Eny, ireo izay nilahatra tao amin'ny magazay Apple tao Palo Alto, dia nahagaga tampoka. ny ora voalohany, alohan'ny hisokafan'ny magazay, Tim Cook sy ireo mpitantana Phil Schiller y Eddie cue Nandehandeha tany izy ireo hiarahaba ireo mpanjifa milahatra.
Tsy isalasalana fa, dia fahagagana mahafinaritra ho an'ireo rehetra izay nilahatra tao nandritra ny andro maro fa ny CEO an'ny Apple dia hiarahaba azy ireo mivantana ary hanaiky ny ezaka ataon'ny tobiny. Andinindininy. Ho fanampin'izay, nandefa ny kaonty Twitter azy i Tim Cook androany @tim_cook miaraka amin'ny bitsika iray momba ny fitsidihany ireo magazay ary milaza fa faly amin'ny asa vitan'i Apple izy.
Zava-baovao iray hafa ankehitriny, miaraka amin'ny iPhone miloko champagne, no ilay miloko. habaka volo, tsy dia mainty noho ilay teo aloha ary noho izany dia mahatohitra ny gorodona sy ny 'pecks' niaretan'ny mainty teo aloha. Araka ny hitantsika, ny fiovana dia miavaka eo amin'ireo fitaovana roa ireo. Iza amin'izy ireo no tianao indrindra?
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fametrahana iOS 7 ary ny iPhone dia tsy maty manandrana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 5s » Nandefa Twitter i Tim Cook ary hita miaraka amin'ny ekipany ao amin'ny Apple Stores ao Palo Alto
KenalSki dia hoy izy:
Ary ireo an'ny Palo Bajo? xDD
Valiny amin'i KenalSki
Zava-misy izany: ny iPhone 5 dia ho very lanja amin'ny fanombohana ireo iPhones vaovao
Ahoana ny fomba hanafenana ny rindranasa, ary hamoronana lahatahiry ao anatin'ny hafa ao amin'ny iOS 7